जहाँ ४ सय वर्षदेखि महिलाले बच्चा जन्माएका छैनन् ! - Jhapa Online
जहाँ ४ सय वर्षदेखि महिलाले बच्चा जन्माएका छैनन् !
अहिले पनि त्यहाँका महिलाहरुले बच्चा जन्माउनका लागि गाउँ बाहिर छाप्रो निर्माण गरी त्यहि बच्चा जन्माउने गरेका छन् । आजको वैज्ञानिक र आधुनिक युगमा पनि यस्ता मान्यता भने कायमै रहनु अचम्मको कुरा हो । एजेन्सी
किन गरियो चीनका पूर्वप्रधान सेनापतिलाई आजीवन जेल सजाय ?
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आगलागी, ७० जनाको मृत्यु
बङ्लादेशका २० हजार वेबसाइट किन बन्द गरियो ?